Alicia tomero | | အချိန်အား
ထိုကဲ့သို့သောအထူးအရည်အသွေးနှစ်ခုရှိသောကိုယ်ခံပညာသရုပ်ဆောင်များမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည် သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လယ်ကွင်းမှာအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စေ။ သူတို့ဟာကြီးကျယ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့မင်းသားတွေပါ ဇာတ်ကောင်များနှင့်ကိုယ်ခံပညာ၌ကြီးသောကျွမ်းကျင်သူများ.
ကိုယ်ခံပညာသရုပ်ဆောင်တွေ သူတို့မှာရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့အခန်းကဏ္ playing တစ်ခုလုံးရဲ့အရည်အသွေးရှိတယ်။ အများဆုံးသူတို့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းများကိုလုပ်ဖို့ stuntman လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်အထူးကောင်းမွန်သောအထူးသက်ရောက်မှုများကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ ၎င်းကိုသင်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်အထင်ကြီးလောက်သောမြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်နှင့်မီးမောင်းထိုးပြရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံသည်ကိုယ်ခံပညာကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်၎င်း၏ရုပ်ရှင်များတွင်စွဲဆောင်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ကိုယ်ခံပညာတွင်တိကျသောနည်းစနစ်တစ်ခုရှိပြီးအထူးသဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောကာကွယ်ရေးစနစ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အတွေးအခေါ်နှင့်အမူအကျင့်များဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤသရုပ်ဆောင်များကိုဇာတ်စင်ကိုကြည့်ပါ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များကစားခြင်းသည်လေးစားထိုက်၏။
1.3 Chuck Norris က
2 ဂျင်း - ကလော့ဒ်ဗန် Damme
3 စတီဗင် Seagal
4 ဂျေဆန် Statham
ကျွမ်းကျင်ကိုယ်ခံပညာသရုပ်ဆောင်တွေ၏စာရင်းတွင် ကြီးကျယ်တဲ့ Bruce Lee အပါအ ၀ င်ကျွန်တော်တို့လျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ သူသည်အနုပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာသင်ကြားရန်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာကိုမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသူ၏ကိုယ်ပိုင်: ဂျက်ကူနာဒက်ကို "ကြားဖြတ်လက်သီး၏လမ်း" ကိုတီထွင်ခဲ့စဉ်ကသူ၏ထူးကဲကောင်းမွန်သောထူးကဲလှသည်။ သူဟာရုပ်ရှင်ကောင်းတွေဖန်တီးခဲ့တယ် "အစိမ်းရောင် Hornet"၊ "စစ်ဆင်ရေးနဂါး" နှင့် "Eastern Fury".
သူသည် Wushu ရှိသူ၏အမျိုးအစားတွင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည် ပေကျင်းအသင်းနှင့်အတူ။ လက်ရှိတွင်သူသည် Mulan ရုပ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်းသူအလုပ်မလုပ်သည့်အခါသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်မှုများကို ဆက်လက်၍ ကျော်ကြားရန်ကျော်ကြားမှုနှင့်ဝေးကွာသွားခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်“ Dragon Fight”၊ “ The Master”,“ The Legend 2”,“ Fist of Legend”,“ The Dragon of the Sword” စသည့်အလွန်အရေးကြီးသောရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကဲ့သို့အရေးကြီးသောရုပ်ရှင်ကိုမေ့နိုင်ပါ "Romeo သေရမည်", "သေစေလောက်လက်နက်" သို့မဟုတ် "The Mercenaries"
Chuck Norris က
သရုပ်ဆောင်မှုအတွက်လူတိုင်းသိတဲ့ထင်ရှားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေထဲကတစ်ယောက် Walker ရုပ်သံစီးရီး, Texas Ranger ။ Chuck Norris သည်သိုင်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးချွန်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အတွက်သူ့အလုပ်တွင်ထင်ရှားခဲ့သည် သူသည်လက်ဝှေ့ထိုး၊ ကရာတေး၊ ဂျူဒို၊ အပြည့်အဝဆက်သွယ်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးလ်ဂျီးဂျစ်ဆုကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သူက Chun Kuk Do ကိုလည်းဖန်တီးခဲ့တယ်။ Taekwando တွင်သူသည်အh္ဌမဒီဂရီအနက်ရောင်ခါးပတ်အဘွားကိုပထမဆုံးရရှိသောအနောက်တိုင်းသားဖြစ်သည်။ သူ၏အကျော်ကြားဆုံးရုပ်ရှင်မှာသူ၏အခန်းကဏ္ in ဖြစ်သည် Bruce Lee နှင့်သူ၏ရန်ပွဲတွင် "The Fury of the Dragon"
သူသည်ကြီးမားသောဖန်သားပြင်ရုပ်ရှင်များတွင်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အဓိကဇာတ်ကောင်များ၊ ထောက်ပံ့သူများနှင့်စတန့်မန်းများ၌ပင်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းတစ်ရာငါးဆယ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဒီမင်းသားကြီးကသူ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားခန်းမြင်ကွင်းတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ဖို့မကြောက်ဘူး။ သူကသူတို့ထဲမှတစ် ဦး ၌သူသည်လျှပ်စစ်ပြတ်သွားခြင်း၊ သူ၏တင်ပါးဆုံတွင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းနှင့်ကျောပေါ်တွင်ကြီးမားသောရန်ဖြစ်ခြင်းများကြောင့်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူသည် Kung Fu မာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် Tuxedo၊ The Forbidden Kingdom, Rush Hour သို့မဟုတ် Hard to Kill to the Tuxedo ဟုခေါ်သည်။
ဂျင်း - ကလော့ဒ်ဗန် Damme
"The Muscles of Brussels" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်ဟာမင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ရုပ်ရှင်ကားများ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်ကိုယ်ခံပညာရပ်ဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ကရာတေး (ဒုတိယအကြိမ်အနက်ရောင်ခါးပတ်)၊ kickboxing နှင့်အဆက်အသွယ်အပြည့်အစုံ။ သူ၏အခန်းကဏ္အားလုံး၌သူသည်မာကျောသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမကြီးများကိုအောင်နိုင်သူများကစားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်နှင့်အတူ2ခုနှစ်တွင်ကျော်ကြားမှုမှထ "သွေးထွက်သံယိုအဆက်အသွယ်" နှင့် "Kickboxer"သူကသူ့ကိုကျော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာငါတို့သိပါတယ်ဆိုတာသေချာပေမယ့် "Universal Soldier", "The White Dragon" နှင့် "The Mercenaries 2" တို့ဖြစ်သည်။
သူသည်သရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သော aikido, kenjutsu နှင့်ကရာတေးကဲ့သို့သောကိုယ်ခံပညာကျွမ်းကျင်သူ။ ကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာရှုခင်းများကိုရိုက်ကူးစဉ်က၎င်းသည်စင်ကြယ်သော၊ ပြတ်သားသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ချွန်ထက်သောကန်များပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်ထူးကဲစွာမဖြစ်ခြင်း၏ထူးခြားမှုကိုပေးသည်။ သူဟာရုပ်ရှင်တွေမှာလူသိများတယ် "အမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်", "သတ်ရန်ခက်ခဲ", "အန္တရာယ်ရှိသောမြေ၌" သို့မဟုတ် "သေမင်း၏အစွန်းတွင်" ။
သူသည်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားခန်းရုပ်ရှင်များတွင်ကျော်ကြားသည်။ သူသည်ကိုယ်ခံပညာရောနှောခြင်းနှင့်ကန်ဘောလက်ဝှေ့နယ်ပယ်တွင်ထူးချွန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စင်မြင့်ပေါ်၌မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကာ“ Transporter”၊ “ The Expendables”,“ War” သို့မဟုတ်“ Wild Card” စသည့်ထူးခြားသည့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကျော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အခြားသရုပ်ဆောင်တွေကိုဘေးဖယ်ထားလို့မရပါဘူး။ သူတို့၏အထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အမျိုးအစားများနှင့်သူတို့၏ခေါင်းစဉ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်များစွာသောသူတို့၏အခန်းကဏ္inတွင်အောင်မြင်မှုရစေပြီးကြည့်ရှုသူများစွာကိုကြိုက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် Lorenzo Lamas နေရာချထားပုံ ၎င်းသည် ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းတွင်ကျော်ကြားခဲ့သည် ယ်စလီ Snipes Blade ကဲ့သို့သောနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်များတွင် Bolo yeung Bloody Sport ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များတွင်လူသတ်မှုကြီး၏အခန်းကဏ္ in မှရပ်တည်လျက်၊ Dolpn Lundgren, Donnie Yen၊ David carradine သို့မဟုတ်မင်းသမီး Ronda Rousey ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » ဂရိတ်ကိုယ်ခံပညာသရုပ်ဆောင်တွေ